Meesha Uu Ka Liito Lukaku Oo La Ogaaday Kaddib Kulankii Arsenal – Garsoore Sports
Meesha Uu Ka…
Rio Ferdinand ayaa rumaysan in Romelu Lukaku kubbadaha uu ku ceshanayo meel ka baxsan goolka wali uu u baahan yahay in uu horumariyo kaddib bandhigii cajiibka ahaa ee weeraryahanka Chelsea uu ka sameeyay kulankii Arsenal isbuucaan.
Chelsea ayaa sameysay hadalheyn weyn kaddib markii ay dib ula soo saxiixdeen Romelu Lukaku oo ay ku bixiyeen 97.5 milyan oo ginni ah isagoo kasoo wareegay Inter horraantii bishaan, xiddiga reer Biljim ayaana saameyn deg deg ah ku yeeshay kooxda kulankii ay 2-0 kaga badiyeen Gunners axaddii.
Lukaku ayaa dhaliyay goolkii furitaanka Chelsea wuxuuna siiyay daafaca dhexe ee Arsenal Pablo Mari waqti aad u xun intii ay ciyaarta oo dhan socotay.
Ferdinand ayaa ku tilmaamay isku dayga Mari inuu ku xakameeyo Lukaku ‘ceeb’ wuxuuna dhaleeceeyay hababka liita ee Arsenal ay isku dayday inay ku xakameeyso weeraryahanka cusub ee Chelsea.
Laakiin daaficii hore ee Manchester United ayaa ku faraxsan rajada laga qabo dagaalka Lukaku iyo Virgil van Dijk isbuucaan iyadoo Chelsea ay Anfield ku wajaheyso Liverpool fiidnimada Sabtida.
“Wali waxaan u malaynayaa in ku-haynta kubbada ee Lukaku ee bannaanka xerada ganaaxa ay mararka qaar ka gudubto intii loo baahnaa” Ferdinand ayaa ku yiri Vibe isagoo leh SHIVE.
‘Laakiin markaad kubbadda soo dhex-geliso gudaha iyo hareeraha sanduuqa, taabashada ninkaygu waa sida xabagta oo kale.
‘Wuxuu xoog u sheegtaa dadka, wuxuu la mid ahaa kii lixaad ee hore u ciyaarayay sanadihii hore, taasi waa waxa uu ka dhigay daafacyada dhexe ee Arsenal inay u ekaadaan, ma aysan garanayn sida loola dhaqmo.
‘[Pablo] Mari waxay ahayd wax laga xishoodo, ma garanayn wuxuu sameeyo.
‘Sida ay isaga difaaceen… aaway Per Mertesacker ama qof sidaas oo kale ah oo ku jira xerada? Fadlan u sheeg waxa ay samaynayaan.